Linear Mwenje Chigadziko, Linear Chiedza, Linear Led Sconce - Luxury
Sangana nemhuri yedu yeLED
Zvino Sangana Noumbozha
Yehunyanzvi yakazara bhizinesi inosanganisa R&D, kugadzirwa uye kutengesa kwezvigadzirwa zvemwenje. Inowanikwa muChengdu, Sichuan Province, China. Iyo ine yekugadzira hwaro hwe800 mativi emamirimita uye vashandi ve100 ..
Yehunyanzvi yakazara bhizinesi inosanganisa R&D, kugadzirwa uye kutengesa kwezvigadzirwa zvemwenje. Inowanikwa muChengdu, Sichuan Province, China. Iine hwaro hwekugadzira hwe800 mita metres uye vashandi zana.
Heano zvikonzero zvishoma nei LED iri tekinoroji tekinoroji yemwenje-uchienzaniswa neCFL, halogen, uye incandescent mababu.
LED inosvika kupenya kwakazara ipapo, pasina kudzima kana kudziya-kumusoro.
LED inoshandisa 85% mashoma simba pane halogen uye 18% pasi peCFL.
Kugadziridza imwe ficha ku LED kunogona kusevha ingangoita $ 7 pamwedzi.
Yepamberi Kugadzira Machine Uye Technique
Yepamberi Yekuedza Machine YeMhando Yekutonga
Nyanzvi R & D Chikwata Chekutsigira
Inogamuchira Yakagadziriswa Order
Kurumidza Kumhanya Mhinduro
CE, RoHS, UL Yakanyorwa
3 Makore Waranti
Nezve Luxury Lighting
Chengdu Luxury Lighting Technology Co, Ltd. yakavambwa muna 2011 uye ine makore anopfuura gumi ekujekesa nhoroondo uye ruzivo. Mushure memakore anopfuura gumi ekuenderera mberi nekuvandudza uye hunyanzvi, Luxury yakanyatsosima zvido zvevatengi uye yakaunganidza hupfumi ruzivo mune zvakakosha zvigadzirwa, ichiita kuti zvigadzirwa zvedu zviwedzere kusimba, kupenya uye zvakanyanya mushandisi-zvine hushamwari.